झक्कु प्रसाद सुवेदी काठमाडौं क्षेत्र नं‍. ६ का बलिया उम्मेदवार ! - Everest Dainik - News from Nepal
झक्कु प्रसाद सुवेदी काठमाडौं क्षेत्र नं‍. ६ का बलिया उम्मेदवार !
यस्तो छ रोल्पादेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता झक्कु प्रसाद सुवेदी उम्मेदवार बनेको काठमाडौं क्षेत्र नं। ६ यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । क्षेत्र नंं। ६ झक्कु सुवेदीको उम्मेदवारीको कारण पनि चर्चित र सबैको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको हो । माओवादी केन्द्रको प्रदेश नम्बर ३ को संयोजक समेत रहेका सुवेदीको चर्चा यसकारण पनि बढेको हो कि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले काठमाडौं २ बाट एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव नेपाललाई फराकिलो मतान्तरले पराजय गर्न सफल भएका थिए ।
उनै सुवेदी फेरि अहिले काठमाडौं ६ बाट माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । अहिले उनी माओवादी केन्द्रको मात्र उम्मेदवार होईनन् । उनी एमाले र माओवादीले बनाएको वाम गठवन्धनको साझा उम्मेदवार समेत हुन् । सुवेदी पार्टी भित्र मैले यो योगदान गरेको छु भनेर भाग खोज्ने नेता होईनन् माधव नेपाललाई हराएपछि उनलाई त्यति ठुलो नेतालाई हराएको पार्टीमा मन्त्री दाबी गर्नुपर्छ भनेर उच्काउने पनि नभएका होईनन् । तर, नेता सुवेदीले त्यो चरित्र कहिले पनि प्रदर्शन गरेनन् ।
उनी केवल पार्टीको इमान्दार सिपाहीका रुपमा मात्र आफूलाई दर्ज गरिरहे । पहिलो संविधानसभामा माओवादीको त्यो उपस्थिति झनै एमाले जस्तो दलको महासचिवलाई हराएको मान्छे पार्टीमा उनले मन्त्रीको इच्छा देखाएको मात्र भएपनि नपाउने कारणै थिएन । तर, उनले कहिले पनि पार्टीबाट मैले पाउनुपर्छ भन्ने सोंचाईनै राखेनन् । उनले पार्टी संगठन निर्माणमा अफ्नो समय व्यतित् गर्न थाले ।
रोल्पा स्थायी घर भएका सुवेदीले रोल्पामा त्यतिबेला गरेको कुशल संगठनको कारण आज पनि रोल्पामा मओवादी जिवित रहेको छ । गएको स्थानिय निर्वाचनमा रोल्पाको विभिन्न जिम्मेवारीको कमाण्ड सम्हालेका सुवेदीले थवाङको पनि पार्टीलाई जिताउने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
केही मान्छेहरुले झक्कु सुवेदी माधव नेपाललाई हराएर पनि राजनीतिबाट गुमनाम भयो भनेर चर्चा परिचर्चा नगरेका पनि होईनन् । कुनैबेला नेता सुवेदीले नेवाः राज्यको इन्चार्जको भूमिका निर्वाह गरे भने अहिले पनि ३ नम्बर प्रदेशको संयोजकको भूमिका निभाईरहेका छन् ।
उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुलाई थाहा छ उनी पार्टीमा मलाई यो चाहियो भनेर कहिले माग्दैनन् तर, पार्टीले जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि जिम्मेवारीबाट उनी भाग्दैनन् । त्यसैले अहिले उनी पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि काठमाडौंबाट उम्मेदवार बनेका हुन् । ७० को निर्वाचनमा नेता सुवेदी उम्मेदवार बनेन् । त्यतिबेला पनि कोही कोहीले हल्ला चलाए माधव नेपाललाई हराएको झक्कुलाई माओवादीले टिकट दिएन, उनी राजनीतिबाट ओझेल परे भनेर । तर, यथार्थमा त्यतिबेला उनी एउटा क्षेत्रको होईन पुरै पार्टी संगठनको संगठन विस्तार र पार्टी बलियो बनाउने अभियानमा पार्टीले खटाएपछि पार्टीको निर्णय शिरोपर गरेर बसेका हुन् ।
अहिले फेरि पार्टीले काठमाडौं ६ मा उनको आबश्यक्ता देख्यो र उनलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।
विभिन्न कार्यक्रममा सुवेदीले भन्ने समेत गरेका छन् मैले गएको ११ बर्षदेखि काठमाडौंवासीकै लागि काम गरेको छु, २ नम्बर बासीको लागि गरे अब म ६ नम्बर बासीको लागि काम गर्न प्रतिवद्ध छु । अहिले २ नम्बर क्षेत्रमा भाँडामा बस्दै आएका सुवेदीले म चाँडै ६ नम्बरमा कोठा सर्छुृ भन्ने गरेको कुरा व्यापक बनेको छ । उनले आफ्नो घर नभएकाले जता डेरा सार्न पनि सकिने समेत तर्क गरेका छन् ।
सारा घरवार छाडेर केवल पार्टी र जनता भनेर युद्धमा होमिएको सुवेदीको परिवारले युद्धकोबीचमा अकल्पनिय दुःख भोगेर पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै यो अबस्थासम्म आईपुगेका हुन् ।
वाम गठवन्धनका उम्मेदवार सुवेदीको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका भिमसेनदास प्रधानसँग हुदैछ । २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन जितिसकेका सुवेदीको ६ नम्बरमा पनि पल्लाभारी रहेको देखिन्छ । किनभने माधव नेपाललाई पहिलो संविधानसभामा पराजय गरेका सुवेदीका काठमाडौको प्रायः सबै क्षेत्रमा व्यक्तिगत शुभचिन्तक समेत रहेका छन् । गएको ७० को निर्वाचनमा क्षेत्र नं। ६ मा योगेश भट्टराईको मत पनि निकै राम्रो आएको थियो । माओवादीको मत र एमालेको मत जोड्दा सुवेदीले अत्याधिक मतान्तरले कांग्रेसका प्रधानलाई पराजय गर्ने देखिन्छ ।
६४ को निर्वाचनमा जितेर आएका सुवेदीले त्यतिबेला बिकास भन्दा पनि संविधान बनाउनुपर्ने अभिभारा बोकेर आएका थिए । तैपनि, उनले २ नम्बरका बासिन्दाका लागि राम्रै गुण लगाउन सफल भएका थिए । अहिले उनी सम्वृधी र आर्थिक बिकासको योजनाका साथ जनताको माझमा आएका छन् ।
उनले अबको निर्वाचनपछि आफूहरुको गठवन्धनको बहुमत आउने भएकाले आज ६ नम्बरका जनताका सामू गरिएका सबै बाचा पूरा गर्ने समेत प्रतिवद्धता गरेका छन् । त्यसैले पनि ६ नम्बरमा सुवेदीको जित सुनिश्चत जस्तै देखिएको छ । आउदा दिनमा सुवेदी ६ नम्बरका जनताका जनप्रिय नेता हुनेमा शंका छैन ।
आँखिर को हुन् त झक्कु सवेदी ?
२०१८ साल माघ २८ गते रोल्पा जिल्लाको साविक गजुल गा।वि।स वडानं। ४ पानीपोखरा र हालकोे सुवर्णावति गाँउपालिका–६ मा जन्मिएका सुवेदी सानैदेखि नेता बन्ने स्वाभावको रहेको स्थानीय बुढापाकाहरु भन्ने गर्छन । हुनत, सुवेदीले अध्यात्ममा बिश्वास गर्दैनन् तर, एक स्थानिय बुद्धा जो उनको आफन्त समेत पर्छिन उनले भने अनुसार सुवेदी सानो छदा गाउँमा आएका एक ज्योतिषले उनका हस्त रेखा हेरेर ‘यो मान्छे सामान्य मान्छे भन्दा फरक हुन्छ, या त यो जोगी बन्छ या त देशकै ठुलो मान्छे बन्छ’ भनेका थिए रे । हुन पनि त्यस्तै भयो रोल्पाको दुरदराजमा जन्मिएका सुवेदी अहिले यो मूलुककै नेता बन्न सफल भए ।
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरुवात गरेका सुवेदी त्यतिवेलाका ‘उम्दा’ विद्यार्थी नेताको परिचय बनाउन सफल भएका थिए । त्यतिवेलादेखिनै उनले जेलनेल भोग्न सुरुवात गरे । २०४२ सालमा आईपुग्दा उनी शिक्षकको जागिरे हुन पुगे । रोल्पा जस्तो ठाँउ त्यो पनि सदरमुकाम होईन दुर्गम गाँउमा जन्मिएका सुवेदीले स्नातक पास गरे र शिक्षकको जागिर सुरुवात गरे । शिक्षकमा पनि उनी नेतृत्व तहमै पुगेर राजनीति गर्न पुगे । अन्याय सहन नसक्ने चरित्रका सुवेदीले शिक्षक हुदै गरेको आन्दोलले उनी रोल्पा सदरमुकाम लिवाङमा पक्राउ परे । हो त्यहि जग हो आज उनी झक्कु प्रसाद बन्नु । उनका आफन्त सुवेदीहरु पंचायतकालमा निर्वाचन जितेर सत्ताको तर मारेर बसिरहेकाबेला सुवेदी उनीहरुको प्रतिकार गरेर फरक धार वामपन्थीको भूमिकामा अघि बढ्नु उनको लागि सामान्य चुनौतिको बिषय थिएन । तर, उनले त्यो अठोट गरे र बिद्रोही भाव लिएर लम्किरहे । २०४६ सालको आन्दोलनमा उनी सक्रिय सहभागि भए । बहुदल आए पश्चात पहिले मसाल, मशाल, एकता केन्द्र हुदै उनी संयुक्त जनमोर्चाको रोल्पाको नेतृत्व तहमा रहिरहे ।राजनीतिले उनलाई यति पच्छायो कि २०४८ सालमा माध्यमिक तहको शिक्षकको स्थाई जागिर छाडेर उनी पूर्णतया राजनीतिमा होमिए । २०४८ सालमा भएको स्थानिय निर्वाचनमा उनी गजुल गा।वि।स को अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनी रोल्पा जिल्लाको जिल्ला बिकास समितिको सभापति बन्न पुगे ।
सुवेदी पार्टी भित्र मैले यो योगदान गरेको छु भनेर भाग खोज्ने नेता होईनन् माधव नेपाललाई हराएपछि उनलाई त्यति ठुलो नेतालाई हराएको पार्टीमा मन्त्री दाबी गर्नुपर्छ भनेर उच्काउने पनि नभएका होईनन् । तर, नेता सुवेदीले त्यो चरित्र कहिले पनि प्रदर्शन गरेनन् ।
उनको लोकप्रियता जिल्लामा ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । उनलाई रोल्पामा केही गर्न नसकेका रोल्पाका केहि ‘सुकुलगुण्डा’हरुले दाङका लठैतहरुसँग मिलेर दाङको चौपट्टामा मार्ने प्रयास सहित उनीमाथि लुकेर हमला समेत गरेका थिए । तर, उनीहरु सफल भएनन् । एउटा उनको रोचक पक्ष भनेको उनी निर्वाचन लड्दै लड्दैनन् लडे भने हार्दै हार्दैनन् ।
उनको सभापतित्वकालको उत्तराद्र्धमा उनी कार्यरत पार्टी तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाले माओवादीको नामबाट जनयुद्ध सुरु गर्यो ।
याे पनि पढ्नुस जनयुद्ध स्विकार गरिसकेको एमालेलाई बिधानमा लेख्न किँन आपत्ती !
२०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध रोल्पाको होलेरीबाट सुरु भयो । लगत्तै जिल्ला बिकास समितिको बाहालवाला सभापति समेत रहेका झक्कु सुवेदी लिवाङबाट पक्राउ परे । ५२ मा पक्राउ परेका उनले शारिरिक र मानशिक यातना कति पाए भन्ने कुरा उल्लेख गरि साध्य छैन । अहिले पनि त्यतिबेलाको पिटाईको कारण उनलाई शरिरमा विभिन्न समस्या आईरहन्छ भनेर उनले बताउने गर्छन । रोल्पामा पक्राउ परेका उनलाई काठमाडौंको भद्रगोल बन्दिगृह पुर्याईयो ।
याे पनि पढ्नुस माेहन बैद्यको प्रस्ताव : माओवादी केन्द्रसंग पनि एकता गरौँ
२०५४ सालमा उनी जेलमुक्त भए र मुक्त भएको केही समय पछि उनी माओवादीको पूर्णतया कार्यकर्ताको रुपमा भुमिगत बन्न पुगे । उनी भुमिगत भएता पनि उनका परिवार सामान्य जीवन जिउदै थिए । तर, जव, जनयुद्ध उचाईमा पुग्दै थियो तत्कालिन राज्यले उनको परिवारलाई दुःख दिने कार्य पनि बढ्दै गयो । उनका छोरा छोरी लुकेर पढ्नुपर्ने, शहरमा बस्न नसक्ने अबस्था सिर्जना हुन थाल्यो । छोरा छोरी मात्र होईन स्थानिय स्कुलमा शिक्षकको जागिर खाँदै आईरहेकी उनकी श्रीमती राज्यले चरम दमन गर्न थालेपछि, तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले क्षण क्षणमा दुःख दिन थालेपछि उनी पनि खाँदै आएको स्थाई शिक्षक जागिर छाडेर भुमिगत हुन बाध्य भईन् । छोरा छोरी पनि भुमिगत हुन बाध्य पारिए । सारा घरवार छाडेर केवल पार्टी र जनता भनेर युद्धमा होमिएको सुवेदीको परिवारले युद्धकोबीचमा अकल्पनिय दुःख भोगेर पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै यो अबस्थासम्म आईपुगेका हुन् ।
रोल्पा स्थाई घर भएका सुवेदीले रोल्पामा त्यतिबेला गरेको कुशल संगठनको कारण आज पनि रोल्पामा मओवादी जिवित रहेको छ । गएको स्थानिय निर्वाचनमा रोल्पाको विभिन्न जिम्मेवारीको कमाण्ड सम्हालेका सुवेदीले थवाङको पनि पार्टीलाई जिताउने जिम्मेवारी पाएका थिए । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको मुख्य आधार क्षेत्र मानिने थवाङमा विप्लवको दल र कांग्रेसले गठवन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको स्थानमा पनि सुवेदीले गाँउपालिका प्रमुख, उपप्रमुख सहित सबै स्थानमा माओवादी केन्द्रलाई जिताउन सफल भएका थिए । उनको अंझै अर्को बिशेषता भनेको उनी युद्धमा होमिनु भन्दा पहिले गाँउमा रहदा जन्मिएका सबै बच्चाको जन्मिएको महिना र गते कहिले हो भन्ने कुरा एक एक भन्न सक्छन् । बरु जन्माउने बाबु आमाले एकछिन सोंच्नुपर्छ ।
रोल्पामा उनी आफ्नो दलको मात्र होईन अरु दलको कार्यकर्ताको पनि उतिकै प्रिय छन् । उनले पार्टीका आधारमा कसैलाई भेदभाव समेत गर्दैनन् । यहि कारणले आज उनी सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएका छन् । बालक, युवा तथा बुढा बुढी सबैको उनी प्रिय छन् ।
ट्याग्स: Jhakku prasad Subedi, Left Unity, maoust center
प्रेममा सम्बन्धमा रहेका एक जोडीले नहरमा हाम फाल्यो
फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीले दिए अचानक राजीनामा
नेपालमा आज ७४० जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो
भैँसी चराउन गएकी बालिकाको अर्धनग्न अवस्थामा शव फेला